Lawyer umthetho ilifa: fumana yakho - Abaqondisi-mthetho ka-Us-intanethi!
Lawyer umthetho ilifa: fumana yakho
Kodwa kwezinye iimeko succession, a lawyer kuyimfuneko
Ukusetyenziswa a lawyer kwimeko a succession ulindeleke ukuba kukho ungquzulwano phakathi ziindlalifa zobukumkaniIndima lawyer kwi umthetho succession iya kuba lokucebisa yakhe okanye yakhe umxhasi, ukufumana ezenzeka emhlabeni phakathi ziindlalifa zobukumkani kwaye sikhusele yakhe umxhasi kwimeko a lwe umgaqo-nkqubo kwiinkundla. A priori, elinolwazi, ngcono ukwazi ukuba siphathe yoshishino ka-succession ingaba notary. Nguye ngubani kwi-main iwonga drafting ka-izenzo kunye namanye amanyathelo ezifunekayo kwimeko succession. Oku kunjalo, umzekelo, xa kubekho ungquzulwano phakathi ziindlalifa zobukumkani. Indima losapho iya kuba umzamo conciliation okanye ukuba ikhusele yakhe umxhasi kwimeko a contentious nkqubo. A lawyer unako lokucebisa kuwe ngomhla modalities ka-ukwaliwa kwesicelo ilifa elo. Uya kukuxelela into amanyathelo aza kuthatha inxaxheba, ixesha-isakhelo kufuneka, njl.
njl, Omnye umzekelo: abaninzi kuni ngabo ziindlalifa zobukumkani kwaye ukholelwa wena wronged kwi-yokwabelana ye-lifa. Ukusetyenziswa a lawyer kusenokuba crucial ukunqanda ungquzulwano kwaye fumana i-amicable isisombululo.
Omnye ayikwazi cite eminye imizekelo succession waba problematic, njengoko umzekelo kwimeko edibeneyo ubunini, xa ziindlalifa zobukumkani musa uyavuma kwi elimfiliba propati (isabelo. ngalo ngayo.) I-lawyer kuza kudlala, succession, indima conciliation.
Ukuba conciliation engenakwenzeka, kwaye ukuba abachopheli-nkqubo initiated, lawyer ke umsebenzi kuya kwenziwa ukuba ikhusele yakhe umxhasi. Abaqondisi-mthetho nokwazi ngokugqibeleleyo umthetho succession. Oko kunokuba luncedo kubabiza ngcono ukuqonda imiba ye-succession, kwaye, balaseleyo, irhafu imithetho kakhulu intsonkothile, apho isicelo estates. Abaqondisi-mthetho linalo igunya kuyo imiba succession kanjalo zinokuba abaxhasi ye-legatees kwabo, kwimeko apho succession wathabatha indawo yabo ophilayo.
Imisebenzi yayo iya kuba ikakhulu lomeluleki: lawyer oncedisa beneficiary ukuba wenu zokudlulisela yayo lemveli (matrimonial ipropati regime, irhafu, itestamente, njalo-njalo).
Kucetyiswa ukuba umnxeba kwi-a lawyer ngubani linalo igunya kuyo imiba succession PHAMBI kokufa ye-legatee.
Fact, kuba legatee, ukuba udibane a lawyer phambi kokufa kwakhe ingaba eyona ndlela ukuphepha enokwenzeka kongquzulwano in elizayo.
Kubalulekile kananjalo eyona ndlela ukuqinisekisa ukuba yokugqibela inqwenelela ye-legatee, ingaba kakuhle kuhlangatyezwana nazo. Ukusetyenziswa a lawyer linegunya kwimeko apho ungquzulwano insoluble. Indima losapho uya ke isicelo Kwinkundla grande isehlo ukuba cela lwe kwiinkundla kwaye ukuba bakhusele umdla wakhe umxhasi. Kunjalo, oku isemthethweni umgaqo-nkqubo iya kuba preceded nge conciliation umzamo. Kubalulekile kananjalo ndivuma kakhulu advised, kwimeko a latent impixano, thatha ingcebiso a lawyer, nokuba ngaba okanye hayi olulodwa kuzo ilifa umthetho, ukuba luhlole zonke kuthetha ka-kunokwenzeka conciliation. Estates unako tear iintsapho, ikhusela kongquzulwano ke kubalulekile. Ukufumana ilungelo lawyer, kufuneka ulumkele ukuba linalo igunya kuyo imiba succession. Umele ube sele wamanzi acociweyo imicimbi i ilifa okanye kulungile-ntle specialized kwi-estates (kodwa hayi necessarily). Preferably, khetha a lawyer unencwadi ezilungileyo amava kwaye seniority, apho ifumaneka kwi-mamela iimfuno zakho, ngubani owaziyo njani zichaza i-ins kwaye outs ngendlela ecacileyo hlobo. Indawo yindlela ebalulekileyo umbutho Khetha a lawyer vala ngokwaneleyo geographically, oku kuya ngaphandle kokuba ufuna ukuhamba iindleko unnecessary. I-ukukhetha i-lawyer kwi umthetho succession kufuneka kanjalo kwenziwa ukususela imirhumo ibe igcwalisiwe. I-imirhumo kufuneka amanyathelo afanelekileyo (okanye nkqu ezantsi). Amazinga ka-abaqondisi-mthetho asingawo regulated Ezi zezinye abaqondisi-mthetho abo, ngokukhululekileyo, ukucwangcisa iintlawulo zabo.
Ezi imirhumo unako vary kakhulu ukusuka kwesinye lawyer komnye: ukusuka euros ukuba eliwaka euros ngeyure.
I-amanyathelo afanelekileyo umyinge kuba a lawyer kwi umthetho succession ebaluleke amabini anamashumi euro (- amathandathu euros) ngeyure. Ukuba akunaso zokuhlawula a lawyer linalo igunya kuzo ilifa umthetho, nceda lumkela ukuba ube unelungelo lokuba zomthetho aid. Ngolwazi oluthe vetshe kwi isemthethweni aid, ukufunda kwiphepha lomsebenzi"isemthethweni Uncedo". Fumana abaqondisi-mthetho kwi uthathelo, thelekisa zabo linge.
amapolisa-inkundla - Russian Uguqulelo - French imizekelo
Адвокат Пашамат - Камерун